lynda, Auteur à déliremadagascar
Socio-eco	 14 février 2020 lynda
Hafatra fototra ho an’ny daholobe. Tsy vao izao no nisy ny aretina coronavirus fa efa nisy tranga ihany koa taloha ary karazana coronavirus vaovao ity hita tany Chine ity, araka ny fanazavan’ny solontenan’ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka, Dokotera Rakotoarivony Manitra nandritra ny famoriana ny mpanao gazety, nanazavana ny zava-misy momba ity valanaretina ity, ny 14 febroary 2020 teny Andavamamba. Continuer la lecture →
Mangataka fanohanana avy amin’ny fitondram-panjakana. Nahazo fanasana amin’ny « Challenge Fight Pancrace de l’Océan Indien » andiany fahadimy izay atao atsy La Réunion ny firenena Malagasy. Continuer la lecture →
Socio-eco	 7 février 2020 lynda
SALON AVENIR ET FORMATION: Manentana ny mpitsidika hitondra CV
Fianarana ambaratonga ambony sy fampananan’asa. Nanomboka androany 07 febroary 2020 eny amin’ny Lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny “salon avenir et formation”. Continuer la lecture →
Lanonana fanaon’ny onjam-peo 96.6 FM isan-taona ny “Rdj mozika” ho fankasitrahana ireo mpanakanto malaza. Ho an’ny taona 2019, sokajy 22 no hotolorana izany. Nambaran’ny filoha tale jeneralin’ny RDJ, Rasolojaona Tahiana nandritra ny tafa ho an’ny mpanao gazety, ny 30 janoary 2020 teny Ambodivona fa ireo mpankafy no tompon-tsafidy ny tokony ho mpanankanto mendrika handray ny amboara isaky ny sokajy. Continuer la lecture →
Socio-eco	 30 janvier 2020 lynda
MBALIK: Herinaratra avy amin’ny masoandro amin’ny vidiny mirary
Kit solaire, azo aloa tsikelikely na indray mandoa. Ao anatin’ny politikan’ny orinasa Telma ny fandraisana anjara amin’ny fanatanterahana ny vinan’ny Filohan’ny Repoblika Rajoelina Andry: ny fampandrosoana azo tsapain-tanàna, azo refesina ary ho an’ny rehetra. Continuer la lecture →
Famaranana ny taom-pianarana 2018-2019 eny amin’ny oniveristem-panjakana. Nanatanteraka filankevi-pirenena tsy ara-potoana ny SECES (sendikan’ny mpampianatra-mpikaroka, mpikaroka-mpampianatra) androany 29 janoary 2020 teny Ankatso. Continuer la lecture →
politique	 24 janvier 2020 lynda
Fanenjehana diso toerana. Notanterahina androany 24 janoary 2020 teny Anosy ny fihaonambe nasionalin’ny antoko AVI (Asa Vita no Ifampitsarana). Continuer la lecture →
politique	 17 janvier 2020 lynda
Hijanona hatreo ny resaka politika fa asam-pampandrosoana ny kaominina no imasoana. Nandray ny asany amin’ny maha ben’ny tanàna azy indray Randrianarisoa Penjy taorian’ny fifamindran-draharaha teo aminy sy ny ben’ny tanana mpisolo toerana izay notanterahina ny 17 janoary 2020 teny amin’ny kaominina Ivato. Continuer la lecture →